ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၃
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၃
NLD ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုကိစ္စအတွက် ကျေညာချက်
သိုးကို အပြစ်ရှာတာ ၀ံပုလွေယုတ်
CNN မှ ဒေါ်စု သတင်း
စီရင်ချက်ချမည်ဆိုသည့် ဇူလိုင် (၃၁) ရက်နေ့ ပြည်တွင်...
ကြက်ဥ အတု လုပ်တာ တကယ်လား..
ကြက်ဥအတုများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်နေ
ဒေါ်စု ရဲ့ ရုံးချိန်း ဇူလိုင် ၃၁ ၂၀၀၉..ပုံရိပ်များ
ဇူလိုင် ၃၁ ၂၀၀၉ သတင်းများ (ရဲရင့်ငယ်)
8888 21th ANNIVERSARY COMMEMORATION (SAN FRANCISCO...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 30th July 2009
ဇူလိုင်လ ၃၁ ၂၀၀၉ အင်းစိန် ထောင်ရှေ့ အခြေအနေ
ဒီနေ့ ဇူလိုင် (၃၁) အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ...
ရွှေအင်းဝလိုင်းမှ ကားတစ်စီး ဘီအိုစီမှတ်တိုင်မှာမီးေ...
How does DASSK spend her Prize Money?
ဒို့ သာသနာထိရင်..မချိဖူးနအဖ..ဆက် ချမယ်
MoeMaKa DailyeNewspaper - 29th July 2009 ...
ဗမာ့ စောင်း - (ဒါရိုက်တာ..အိုင်ဝို ဂျီးမား)
မတရားတာတွေ အန်ထုတ်ကြစို့ 
8888 အမှတ်တရ တွေနဲ့ကနေဒါမှာ ကျင်းပမယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စ မနက်ဖြန် ၃၀ရက်ေ...
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပ...
ဒေါ်စု အမှုဟာ နိုင်ငံတကာအရေးလို့မစ္စတာကင်တားနားကဆိ...
မြန်မာ့စီးပွား ပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်း အိုဘားမား တိုးမြှ...
XX သည်မ ပါးစပ်လောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိတဲ့ နအဖ မြန်မာ...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 28th July 2009
A possible strong trigger to bring Burma into UNSC...
ဇူလိုင်လ ၂၈ ၂၀၀၉ သတင်းများ
မေတ္တာပါလ ဓမ္မဝေဒဂူ နွေရာသီ ယဉ်ကျေးမူ ကလေးသင်တန်း Bu...
21st 8888 ceremony @ LA on 8/9/09
လင်းဒ တွေ ထ နေကြတယ်..သတိ
Donors to reevaluate support for Myanmar's fight a...
သူဝှက် ထက်သာ တဲ့ သဘက်
အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင် ခေါင်းမော့နေဆဲ
ဒို့ ခေါင်းဆောင်ကို ကာကွယ်ဝန်းရံကြ
ဘိန်းရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးသူ ဒုက္ခသည်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံ...
free Burma!! Burma Path...
မြန်မာ ကလေးငယ်များရဲ့ ရှေ့ရေး အလားအလာ..
မိုးမခ သတင်းစဉ် ဇူလိုင် ၂ရ ၂၀၀၉
လေးစားထိုက်သူမို့ဆုတွေ သယ်..
MoeMaKa DailyeNewspaper - 26th July 2009
အမိမြန်မာပြည် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ေ...
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ ချိုတေးသံရှင်
G wave ၏ လှုပ်ရှားမှု
စစ် နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး
ကမ်းကုန်အောင် မိုက်မဲ့ နအဖ..
ပြည်တွင်းရှေ့ နေတဦးရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု့...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 24th July 2009
ဟုတ်တာတွေ ပေါ်လာပြီ...နျူကလီယားလိုချင်လို့ လူဆိုးေ...
24-07-09 Lawyer U Nyan Win speaks about Daw Aung S...
သီတင်းကျွတ် ၂၀၀၉ အတွက်ကျေညာချက်
It is not for your eyes only. It is for public eye...
ဘာမှ မထူးဖူး အရောင်မရှိတဲ့ အာစီယံ
ပေါ်တင်ကြီး..ညာ မပေးချင်တာ ဘယ်သူလဲ
MoeMaKa DailyeNewspaper - 23rd July 2009
ထောက်ခံအားပေးသူများ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ စုဝေးရောက်ရှ...
ဒေါ်စုအမှု တံခါးပိတ် တရားခွင်သို့ သံတမန်များ တက်ရောက...
တပ်မဟာ(၆) နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားဖ...
ခါတော်မီ အာဇာနည် မဟုတ်ပါ
၂၀၁၀ လမ်းပြမြေပုံ ကိုခါးပိုက်ဆောင်ပြီး မျက်စိမှိတ်...
စစ်အစိုးရမှ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ကုန်သွယ...
ဒေါ်စုကို လွှတ်ပေးရင် မြန်မာ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး တိုးလ...
မနက်ဖြန် တွေ့ခွင့်တောင်းတာကို အကျဉ်းဦးစီးဋ္ဌာနက ပြီ...
ဒေါ်စုနဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ နောက်ဆုံး လျှောက်လဲခ...
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် နဲ့ဟီလာရီတွေ့ မည်။
ပတ်စပို့ နဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ တပ်ပြေးများ
အာဆီယံ၏ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမူကြမ်း ဝေဖန်ခံနေ...
လူထုကို လူထုနဲ့ တိုက်ရမယ်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောဆ...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 20th July 2009
သံဃာအတုဆိုတာ ဒါမျိုး နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ဦးသုဇန (မြိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဟတ္တမ ဂန္ဒီဆုချီးမြှင့်
စစ်ဗိုလ်နှစ်ယောက်က ရဲ ယောင်ဆောင်ပြီး ပြည်သူထံမှ ဆိ...
နံရံတွေ မှာ နားတွေ ရှိတယ်..
NLD 19 July သဘာပတိမိန့်ခွန်း(အာဇာနည်နေ့)
အမှုတောင် စစ်မပြီးသေး..သူက လုပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို အစအ...
သန်းရွှေသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ( ဦးရာဇတ်၏ သား) ထံမှ
NLD-statement-on-19th-July-2009 သဘာပတိ ၏ မိန့် ခွန...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၆၂-နှစ်မြောက် အာဇာန...
MoeMaKa DailyeNewspaper - July 18th 2009
greatestglobalcitizen-aung san suu kyi
၆၂-နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု တချို...
၆၂ နှစ်ပြည့်မြောက် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်း ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲထားသည့်အပေါ် တပ်တွင်းမ...
သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့် ခွန်း
မနှေးယခူ အလေးပြုကြပါစို့ 
New Song for Daw Aung San Suu Kyi ! (Generation Wa...
ကြယ်တွေ ကြွေတဲ့နေ့ တနေ့ 
န အ ဖ မှမှေးမှိန် သေးသိမ် အောင်ချန်လှပ်ထားသော နိုင...
သတင်းများ..ဇူလိုင် ၁၇ ၂၀၀၉
ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် တိုး...
( တတိယလေးလပတ် လျွှို့ဝှက်မှတ်တမ်း)
SPDC (Burma) - Internet Enemy 2009
သူတော်ချင်းလွေ့ လွေ့ ..မသာ အချင်းချင်း တခွေ့ ခွေ့ ...
မောင်အေး ရုရှား ခြေဖက်တာ ဘာကြောင့်လည်း..
တတ်တဲ့ လူတွေ ကပြောရင်..တတ်ယောင်ကားတွေက နားထောင်
အမှုအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ ဒေါ်စုနဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ ...
သခင်အောင်ဆန်း ရဲ့ တဘ၀စာ နဲ့ မြန်မာပြည် အရေး
အောင်ဆန်း (သို့ ) အရိုင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အရေး...
MoeMaKa နေ့ စဉ်သတင်း 16th July 2009
ရုရှား - မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
အလင်းအိမ် မဂ္ဂဖင်း ဖူလိုင် ၂၀၀၉
မြန်မာအရေး လှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ Richard Gere
MoeMaKa DailyeNewspaper - 14th July 2009
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ မသင်းဇူလိုင်ကျော်။
အာဇာနည်သွေးမြေကို စွန်းတဲ့ ဇူလိုင် (၁၉)
MoeMaKa DailyeNewspaper - 13th July 2009
နအဖ က အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပြီးရင်. ပြေးဖို့ စီစဉ်နေတယ...
သန်းရွှေခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ဖုံးကွယ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသာ...
ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လယ်သမားများ အလုပ်လက်မ...
ကလိန်ကကျစ်တွေရဲ့ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်စကား
နေပြည်တော်မှာ မြေမြိုဖို့ ဇာတ်လမ်းက တော့စလာပြီ
အစိုးရပိုင်သတင်းစာများမှ A(H1N1) တုပ်ကွေးကို စနစ်တ...
တပ်မတော်သဘောထားမှန်သိသွားကြသော DKBA နှင့် KPF တပ်သ...
ဗမာ့ ရိုးရာဓါတု အစားအသောက်များ
(သတိ) သန်းသန်းတို့ ရှက် ရမ်းရမ်းတော့မယ်
ကျူးကျော်လာသူတို့ ရန်သူ (ပေါက်ဖေါ်ကြီး ဂရိတ်ဝေါလ်) ...
တပ်တွင်းအမှန်တရား ကြိုးဆွဲပြီး ပြ
ပြည်သူများနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာရဲဘော် များ သိစေရန်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့် ခွန်း နှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်...
ABSDF မှ ဖိတ်စာ..
BLC ( Burma Lawyer' Council) statement on grievou...
19 July ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်း
အိရော အိရော နှင့်
ကရင် ပြည် သတင်းဗျာ (ကရင်ပြည်သူ..သားများဘေးမသီရန်မခ...
၂၄ရက်နေ့ သောကြာနေ့ နေ့လည်၂နာရီ မှာ အပြီးသတ် လျှောက...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 9th July 2009
၀ါဆိုလပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ 
အာဇာနည်နေ့ (သို့ ) နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး
လွှတ်တော်အမတ်လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေသူ ဦးကျော်ဆန်း(အငြိ...
သူတို့ ကျ..ရပါလား..တခုခုတော့ မှားနေပြီ
ဗန်းမော်မြို့မှာ ရွှေဆိုင်ဓားပြတိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ တရာ...
(၆၂ ) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ 
နာက ပိုသာတယ်.ကျောက်ဆည်သားကိူ ဘာတင်သလဲ.ဟိ ဟိ..
ပထမဆုံး A/H1N1 တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရသူ မိန်းကလေးငယ် ဆေ...
မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ ဗြိတ...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီး၊ လူများစွာသေဆုံးနေ။
တပ်ဆင်ကိုများ အားကျနေသလား တေဇ?
MoeMaKa DailyeNewspaper - 7th July 2009
လာကြဟေ့ ခွေးဖင်ပြိုင် ကန်ကြမယ်
ဘိန်းစိုက်နေတဲ့ မြန်မာ..ဘိန်းတွေ စားနေတဲ့မြန်မာ.....
ဒါ ဟောလိဝုဒ်က ကင်မရာ လှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖူး..တကဲ့ ဖြ...
Walk On (TributoaAung San Suu Kyi) - U2-360º@Cam...
ခေါင်းငုံ နှာချေးသုတ်ခံပြီး ပြန်လာတဲ့ ဘန်ကီကြီးရဲ့...
၀က်တုတ်ကွေးက made in Burma မဟုတ်တဲ့ဗျာ..
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ၏ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များ
weeklyeleven.com ကိုမသွားကြနဲ့virus ကိုက်တတ်တယ်
နအဖ လက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံက ခလေးများ ဘဝ
၅ ကြိမ်မြောက် KIO က နယ်ခြားစောင့်တပ်အရေး ထပ်မံ ဆွေ...
၇ ဇူလိုင် ကိုမမေ့ ကြနဲ့ (ဂျပန်. မြန်မာသံရုံးရှေ့)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် HIV, AIDS ရော ဂါကြောင့် နှစ်စဉ်လ...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 6th July 2009
Historical Photos of7July Incident by ABFSU
ဗူးသီးကို ထောက်ထားသော ဆူးများ.
Burmese Martyrs Day in Los Angeles
ဗိုက်ဆာသောကြောင့် ဘာသာကို ငွေနဲ့ လဲစားရသူများ..
[ပြည့်စုံ] စစ်အာဏာရှင်နှင့် ဆဲဗင်းဂျူလိုင်
မေ့မရသော..ဇူလိုင် (၇)ရက်..စစ်အာဏာရှင်ရက်စက်တဲ့နေ့ ...
သူ့ ကိုဘယ်သူကတင်မြှောက်ထားလို့ဒီလောက်လူပါးဝနေရတ...
မိုက်ပါပေ့ သန်းရွှေ..ဇက်ကောင်းလို့ဓါးတောင်းနေပါလာ...
၇ ရက်ဇူလိုင် မမေ့နိုင်
Myanmar's future must be rooted in respect for hum...
U Thant's peace effort to ease Cuban Missile Crisi...
FREE AUNG SAN SUU KYI dedicated to by LIGHT MY TUN...
အစကတည်းက ဗေဒင်မမေးလည်း သိပြီးသားတွေ
ယနေ့ တိုင် အမှတ်တရ. (၇ )ရက်တဲ့ .ဇူလိုင်
တာဝန်သိသူ တိုင်းပြည်ချစ် ပြည်သူဖြစ်လိုက သင်ပြန်စဉ်...
the philanthropist, Myanmar,
၇ ဇူလိုင် ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံ ကိူုယ်တွေ့ 
Seven July မမေ့နိုင်သော နေ့တစ်ရပ်
မမေ့သေးဖူးဟေ့..သွေးစွန်းတဲ့ ဇူလိုင် (ရ)
MoeMaKa DailyeNewspaper - 4th July 2009
သူတို့ တွေက ကျွန်တော်တို့ ကို ဂရုမစိုက်ကြဘူး (The...
ကိုကောင်းကင် ကိုရဲ့(ကျွန်)ဆိုတဲ့ ကဗျာ
U.N. chief in Myanmar
Mr. Ban Ki-moon ၏ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီး ထိုင်းနိုင်င...
NLD CEC အဖွဲ့ဝင် လူကြီးများ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်း...
Wake up Binkimoon
UN’s Mr. Banki-moon on tough mission to Burma
ကိူယ့်ရင်ဘတ် ကိုယ်ပန်းထိုးတာတောင် ကြောက်နေရပါလား
၃၀.၆.၂၀၀၉မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၁လ(...
Burmese-Cartoonist-U Pe Thein Self Biography
Burmese Exiles, Groups Hold Hope for UN's Visit
အန်တီစုအတွက် U2 အဖွဲ့၏ ဖျော်ဖြေရေးပွဲမှတ်တမ်း
ဗိုလ်ချုပ်စစ်တပ်လား.သန်းရွှေ စစ်တပ်လား..စဉ်းစား ရဲေ...
တေဇရဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုင်တက်အသင်း ကလိမ်ကကျစ်ကျပြီး MNL...
The Philanthropist, Myanmar, Ruby are forever
Bogyoke Aung San Poems from 1964 Arrzarni Naet
ဘုရားရှေ့ မှာ ပုပ်နေတဲ့ မိစ္ဆာ
မိုးမခ online သတင်းစာ ဇူလိုင် ၂ ..၂၀၀၉
လူတုပ်ကွေး ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်သည့် အပိုင်းကိုသာ အထူး ဂ...
တယ်တော့ ထင်ပါဖူး..ကော်ဇောနီနဲ့ ကြိုမယ်လို့ 
လော်ရာဘွတ်ရ်ှက.. မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့သတ္တိကို ဒ...
Semenyih Detention Camp တွင် ဆူပူမှုဖြစ်ပွား
မိုးမခ online သတင်းစာ ဇူလိုင် ၁ ..၂၀၀၉
ယက်တောကို သဘောကျပြီး ရေကူးသွားမဲ့ ဘင်ကီမွန်း
ဒို့ ဘိ်ုးဘွားအမွေတွေ တရုတ်ကို ပေါချောင်ကောင်းပေးေ...
ငါလည်း လူမင်းထက် သရုပ်ဆောင်တော်တယ် မယ်ကြိုင်ရေ
A/H1N1တုပ်ကွေး ကူးစက်ရောဂါ နှင့်မြန်မာပြည်။
၈၈၈၈ ပြည်သူသတင်းစဉ် ဇူလိုင် ၂၀၀၉
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋ္ဋိညာဉ်စာတမ်းဟူသည်မှုာ
64 Power of Power 54
ဇုလိုင် ၁ရက်၂၀၀၉ သတင်းများ
THE PHILANTHROPIST Episode2"Myanmar" လာပြီ
နင့်အဘကြီးတွေ ကြည့်နေတယ် အခုမလာနဲ့ဦး
သူခိုးတွေ လုပ်တဲ့ chat ဖိုရမ်များ မသွားမိစေဖို့ 
ပုပ်တော့ ပေါ်ခဲ့ပြီ..ဟုတ်တော့ ကျော်ခဲ့ပြီ
ကျောင်းသားများ နှာခေါင်းစည်းမတတ်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းရ...
FSOC BURMA HUMAN RIGHTS REPORT -KAREN HILLTRIBES